Iflethi epheleleyo kunye neyanamhlanje e-Indaiatuba - I-Airbnb
Iflethi epheleleyo kunye neyanamhlanje e-Indaiatuba
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Luiza
UMaria Luiza yi-Superhost
Iflethi iyafumaneka ukuba uhlale e-Indaiatuba kwaye wonwabele amava amnandi esixekweni. Indalo esingqongileyo inoyilo lwangoku noluthambileyo, ibonelela ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze uhlale ubalasele. I Flat unalo nekhitshi (cooktop, microwave, ifriji, izinto zasekhitshini, izitya), isuti (Queen ubungakanani ebhedini, air conditioning, nelinen ngokupheleleyo, kwimiqamelo, idraya yeenwele), igumbi lokuhlala (smart TV, itheyibhile ezisebenzayo) kunye ibhalkhoni.
Ikhompleksi yeNombolo enye ibonelela iindwendwe ngeziseko ezingundoqo ezibanzi, singasathethi ke ngokhuseleko oluphezulu, ukubeka iliso kwangaphakathi nangaphandle kwendawo eqhelekileyo kunye nokhuseleko kumnyango wokungena weHotele.
Zineendawo eziqhelekileyo zokusetyenziswa simahla, kunye nephuli yokubhukuda eshushu, i-sauna, indawo yokuzivocavoca, igumbi lokuhlangana, igumbi lemidlalo, indawo yokwamkela iindwendwe, indawo yokupaka i-valet ibandakanyiwe, isidlo sakusasa (ehlawulwa ngokwahlukileyo, jonga isixa-mali kwindawo yolwamkelo lokusekwa)
Ubumelwane apho ikhoyo indawo yokuhlala yindawo ezolileyo ekufutshane nayo yonke into esixekweni, ibekwe kanye kumbindi we-Indaiatuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Luiza
Nayiphi na imibuzo okanye imibuzo ndiyafumaneka iiyure ezingama-24 ukukunceda.